Am-pandosirana Ny Balan-tafondron’ny Ady, Miady Amin’ny Hatsiaka Mamirifiry Ao Avaratr’i Myanmar Ireo Sivily Kachin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2017 9:15 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Türkçe, 日本語, Español, English
Nanorina toby tao amin'ny sisintany Shina-Myanmar ireo sivily kachin mba hitsoahana amin'ny fandrosoan'ny fifankahalana misy eo amin'ny Tafiky ny Fahaleovantenan'i Kachin sy ny Tafik'i Myanmar. Sary avy amin'i Myo Min Soe/ Ny Irrawaddy
Ity lahatsoratra nosoratan'i Myo Min Soe sy Nan Lwin Hnin Pwint ity dia avy amin'Ny Irrawaddy, tranonkalam-baovao iray tsy miankina, ary naverin'ny Global Voices zaraina eto ao anaty fifanarahana-fifampizarana votoaty.
Resahan'ny lahatsoratra ny momba ny ady ao an-toerana ifanaovan'ny tafiky ny fanjakana Myanmar sy ny Tafiky ny Fahaleovantenan'i Kachin. Na dia teo aza ny dingana fampandriampahalemana natomboky ny fanjakana izay niditra teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona lasa, foko mitam-piadiana isan-karazany manerana an'i Myanmar no mbola mirotsaka an'ady mifanandrina amin'ny miaramila avy amin'ny fanjakana nasionaly. Niteraka krizy ho an'ireo mpitsoa-ponenana ireny ady ireny. Mampiseho ny fiantraikan'ny ady eo amin'ireo mponina sivily ity lahatsoratra eto ambany ity
Efa ho olona nafindra anatiny miisa 2.000 (iDPs) no tonga tao amin'ny tànanan'i Shait Yang tao amin'ny Distrikan'i Laiza, faritra iray fehezin'ny Tafiky ny Fahaleovantenan'i Kachin (KIA), tamin'ny 21 Janoary 2017. Avy any amin'ny toby Zai Awng sy Hkau Shau ao amin'ny faribohitr'i Waingamaw ireo iDPs ireo.
Tsy maintsy nandositra ny toby ry zareo ny alin'ny 19 Janoary rehefa nirotsaka manodidina ny tobiny ireo balan-tafondro – natifitra nandritra ny ady teo amin'ny Tafik'i Myanmar sy ny KIA. Nirohotra nankao amin'ny tànanan'i Shait Yang ireo sivily ireo, izay mitoetra eo amin'ny sisintanin'i Myanmar sy Shina. Nanantena izy ireo fa ho azo antoka ao Shait Yang satria tsy nisy miaramila tany, ary satria nanao fifanarahana ny Sinoa sy ny KIA fa tsy hametraka miaramila akaiky loatra ny sisintany. Niady mafy mba hanampiana ireo vao tonga ny kaomity iray mpanampy ny IDP sy mpitsoa-ponenana .
Tsy nanampy mihitsy ny toetrandro—iray amin'ireo misy orampanala ao Myanmar ilay faritra. Amin'ny alina, midina hatrany amin'ny -4 degre Celsius (25 degre Fahrenheit) ny maripàna. Tamin'ny 25 Janoary, rehefa nitsidika tao Ny Irrawaddy, mponina sasantsasany tao amin'ny toby no tsy ampy akanjo mafana mba hiarovany tena amin'ny hatsiaka mamirifiry. Ny sasany nanao afo mba hahazoana hafanana.
”Mamono ahy ny ranjoko. Ngoly noho ny hatsiaka izy ireo,” hoy Laphai Zau Ra 60 taona, izay nisalotra akanjo bà manga efa tonta fotsiny. Niteny izy fa tsy nanana fotoana nakàna akanjo hafa izy fony nihazakazaka namonjy ny ainy, hiala amin'ny balan-tafondro avy ao Zai Awng.
IDP iray hafa, Kawt Mai, no niteny fa natahotra ny alina izy satria tena lasa tafahoatra ny maripàna.
”Tsy mbola niaina izany karazana hatsiaka izany aho teo amin'ny fiainako,” hoy izy. ”Toa lava be izany rehefa miandry ny hahavakian'ny andro aho.”
Mitoetra ao amin'ny iray amin'ireo faritra vitsivitsy ao Myanmar izay misy orampanala ny tobin'ireo mpitsoaponenana. Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Kachin iray mpitsoaponenana niezaka ny hanafana tena ao amin'ny toby. Sary ao amin'ny Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Sivily Kachin manangona kitay mba ho tafavoaka velona amin'ny maripàna mangatsiaka mamirifiry. Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Manampy ny fianakaviana amin'ny fanangonana kitay manerana ny toby ireo ankizy kely. Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Efa ho olona 2.000 no nitsoaka ny tànanany taorian'ny fifandonana vao haingana teo amin'ny Tafiky ny Fahaleovantena Kachin sy ny tafik'i Myanmar. Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Ankizy Kachin milalao ao anatin'ny toby. Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Sivily Kachin nitsoaka ireo fanafihana tamin'ny fitaovam-piadiana mavesatra, ankehitriny miady amin'ny maripàna mangatsiaka mamirifiry ao amina toby IDP iray ao Shait Yan, Distrikan'i Laiza. Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy
Sary avy amin'i Myo Min Soe / Ny Irrawaddy